Mandray amim-pitiavana hitsidika China Red Flag Textile
ny mpitantana ny 18-05-07
Isan-kerinandro, mpanjifa avy amin'izao tontolo izao tonga mitsidika China Red Flag Textile, Ukraine, Torkia, Rosia, Moldavia, Romania, Ejipta, India, Indonezia, Vietnam, Brezila, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Venezuela, Maorisy sns By saha hitsidika China Red NY ...
Fahombiazana Textile International fampirantiana ara-drariny
Vao haingana antsasaky ny taona, China Qingdao Tianyi Group Red Flag lamba fitaovana efa mandray anjara Torkia Istanbul, Indonezia Djakarta, Pakistan Karachi, Ejipta Cairo, Bangladesh Dacca, India Ahmedabad sy Surat Textile fampirantiana iraisam-pirenena. Hihaona namana maro taloha sy ny mpanjifa vaovao maro. Mba hahazoana ny K ...
Great! 3 andro feno 24 40 fitoeran-tongotra
Ejipta lehibe mpanjifa, efa mividy mihoatra ny iray zato fiaramanidina looms rivotra. Misaotra ny mino sy ny fanohanana. Tamin'ity indray mitoraka ity, 24 40 fitoeran-tongotra mavesatra entana indray. Ireo fomba amam-panao rehetra looms-nanao milina, rivotra tuck-in rafitra: Operation sy fikojakojana mora, avo angovo mahomby sy fahavaratra. Best tombony ny faha ...
2018 Professional fiofanana
Rehefa avy China New Year fety, fiofanana matihanina voalohany. Mpiasa rehetra dia tokony ho fampiofanana sy ny fitsipika ihany ambaratonga pitsapana dia afaka mahazo an-ara-dalàna ny asa. Avy eo aloha-fivoriambe andalana mpiasa rehefa avy-fanompoana matihanina mpiasa, anisan'izany ny varotra-barotra, ara-bola mpiasa, maso tsara ny olona sy ny sisa. W ...
Shanghai ITMA Asia + CITME 2016 Trade ara-drariny
Ny ITMA Asia + CITME 2016 natao tany Shanghai, Shina hatramin'ny 21 ny 25 Oktobra tao amin'ny National Center Exhibition sy ny Fivoriambe. Qingdao Tianyi Group Red Flag Textile milina CO., LTD natao resaka ara-teknika maherin'ny 1000 mpitsidika nandritra ny dimy andro fampirantiana Shanghai. Ny ankamaroan'ireo faha ...